Shirka amniga oo lasoo gaba-gabeeyay iyo qodobo xasaasi ah oo laga soo saaray (SAWIRO) – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Shirka amniga oo lasoo gaba-gabeeyay iyo qodobo xasaasi ah oo laga soo saaray (SAWIRO)
Waxaa maanta magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya lagu soo gaba-gabeeyay shirka golaha amniga Qaranka oo ay yeelanayaan madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada dalka.
Shirkaasi oo muddo labo maalmood ah hakad galay ayaa furmay 5-tii bishaan aynu ku jirno, wuxuuna socday muddo seddax maalmood ah, iyadoona maanta lasoo gaba-gabeeyay.
Qodobada shirkaasi looga hadlay ayaa waxaa ka mid ahaa amniga dalka iyo arrimo kale oo dhowr ah.
Madaxweynaha Jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo oo markii hore shirkaasi furay 5-tii bishaan ayaa maanta ku wareejiyay inuu shir guddoomiyo ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre.
Aggaasimaha warfaafinta xarunta madaxtooyada Soomaaliya C/nuur Maxamed Axmed ayaa sheegay in shirkaan uu daba socda shir bartamahii bisha April lagu qabtay xarunta madaxtooyada Soomaaliya.
Wasiirka gaashaandhiga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya C/rashiid Maxamed C/laahi oo war-murtiyeedka shirkaasi warbaahinta u aqriyay ayaa faah-faahiyay qodobadii kasoo baxay shirkaasi.
Qodobadaasi ayaa waxaa ka mid ahaa in la sameeyo guddi farsamo oo ka shaqeeya dhameystirka qaab dhismeedka amniga Qaranka oo ay ku jiraan qaab-dhismeedka ciidamada nabadsugidda, booliska iyo ciidanka asluubta.
Guddiga la magacaabi doonno ayaa ka kala imaan doonna dowladda federaalka, maamul goboleedyadda dalka iyo gobolka Banaadir.
Qodobada kale ee shirka ugu muhiimsan ayaa waxaa ka mid ahaa in si wadajir ah looga qeyb qaato dagaalka lagula jiro Al-shabaab, taasina ay muhiim u tahay dalka oo dhan.
Ugu dambeyntii, golaha amniga qaranka ayaa si wadajir ah isku raacay in seddaxdii biloodba mar ay kulmaan.
HOOS KA AQRISO WAR-MURTIYEEDKA SHIRKA